पहिलो हाफमा रुसको २ गोल साउदी शुन्य गोलमै सीमित, दोस्रो हाफ केहिबेरमै सुरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पहिलो हाफमा रुसको २ गोल साउदी शुन्य गोलमै सीमित, दोस्रो हाफ केहिबेरमै सुरु
एजेन्सी । विश्व फुटबलको महाकुम्भ रुस विश्वकप २०१८ को उद्घाटन खेलमा आयोजक रुसले २ गोलको अग्रता लिएको छ ।
घरेलु टोली रुसले एसियाली राष्ट्र साउदी अरेबीयामाथि पहिलो हाफमो समाप्तिमा २–० गोलको अग्रता लिएको हो । साउदीले भने खेलमा कुनै गोल गरेको छैन् । रुसका लागि सुरुवाती गोल खेलकोे १२ औं मिनेटमा लरी गाजन्सकीले हेडरमार्फत गरेका हुन् ।
अलेसान्ड्र गोलोभिनको क्रसमा लरीले गोल गरेका थिए । त्यसैगरी दोस्रो गोल पहिलो हाफ सकिन २ मिनेटबाँकी छँदा डेनिस चेरिसेभले गरेका थिए । चेरिसेभ स्पेनिस फुटबल क्लव भिल्ला रियलका खेलाडी हुन् ।
उनले रोमान जोबनिनको पासमा गोल गरेका थिए । पहिलो हाफसम्म साउदी अरेबियाले बल पोसेसन ६३ प्रतिशत कायम गरेपनि उसले गोलभने गर्न सकेको छैन् । साउदीले ४ पटक गोलको प्रयास गरेको छ ।
तर कुनै बल पोष्टको दिशामा गएको छैन् । रुसलेमात्र ३७ प्रतिशत बल आफ्नो पक्षमा राखेको छ । तर २ गोल प्रयास मध्य २ बल पोस्टको दिशामा जाँदा रुसले दुवै गोल गर्न सक्यो ।
दोस्रो हाफमा साउदी अरेबीया २ गोल फर्काउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रनेछ । दोस्रो हाफ केहिबेरमा सुरु हुनेछ । रुस विश्व वरियतामा साउदीभन्दा कमजोर टोली भएपनि आयोजक राष्ट्रले अहिलेसम्म उद्घाटन खेलमा हारेको इतिहास छैन् ।